IPX-451 She’s Lifting Her Shame Ban!! – Karen Kaede | Movie Review ျမန္မာ စာတန္းထိုး
Drama Adult Japan
Dark Side Production မှတင်ဆက်သည်။
Karen Kaede, how to explain it. A pure girl with beautiful eyes doing obscene things. The face on an angel with the body ofademon.
Karen Kaede ကို ခံစားကြည့်ဖို့ ဒီဇာတ်ကားက လုံလောက်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားက ၃ နာရီနီးပါးကြာပေမယ့် Karen Kaede ကြောင့် ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်း မသိလိုက်ရပါဘူး။ဇာတ်လမ်း ကတော့ ကျွန်တော်နှင့် ပန်းချီ ဆရာမလေးပေါ့… အစပိုင်းမှာ တအားတွေ ငြိမ့်ညောင်းပြီး Romantic ဖြစ်နေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကံကြမ္မာဆိုး ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ် ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ကလေးတွေ လုံးဝမကြည့်သင့်ပါဘူး။ 21 နှစ်ကျော်သွားမှ ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။